31/12/2011 : Filoha RAVALOMANANA : « ny fahatongavako any ihany no vahaolana… »
Amin’izao faran’ny taona 2011 izao dia nitondra firarian-tsoa ho an’ny vahoaka Malagasy ny Filoha RAVALOMANANA. “Manantena isika fa hitondra ho avy mamiratra io taona 2012 io” hoy izy raha nitafa tamin’ny vahoaka teo amin’ny Kianjan’ny Finoana. “Efa nanankina ny fiainantsika tamin’Andriamanitra isika” hoy izy “ ka aoka ho tohizana izany”. Namafisin’ny Filoham-pirenena kosa fa efa tapa-kevitra ny hody ny tenany ary tsy miova hevitra ny amin’izany saingy tsy maintsy mifandamina amin’ny fanjakana Afrikana Tatsimo ho fanajana ny telo taona nampiantranoana azy sy ny fianakaviany tany an-toerana. Nampieritreritra tsara ireo rehetra avy amin’ny Ankolafy ihany koa izy miakasika ny filazana fa niditra ary sahy hiavoaka. Nambarany mantsy fa tsy mbola misy izany fankatoavana izany raha tsy izy tenany no tonga eto Madagasikara satria ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa dia efa nanantitra fa araka ny fahatanerahan’ny tondro zotra no ijerena ny momba an’I Madagasikara. Mikasika ireo rehetra manenjika sy manakana ny fiverenany ary tsy mametraka fitoniana kosa dia nilaza ny Filoha RAVALOMANANA fa “fotoana tokony hisian’ny fahatongavan-tsaina izao sao hivaly amin’ny taranaka fara mandimby ny atao amin’ny vahoaka Malagasy”.
24/12/2011 : Filoha RAVALOMANANA : "Hain'Andriamanitra ny mandahatra ny zavatra rehetra ..."
"Niakasa ny hanao Krismasy miaraka aminareo aho saingy Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra". Isan'ny hevi-dehibe nofonosin'ny hafatry ny Filoha RAVALOMANANA ho an'ny vahoaka Malagasy izany raha nitafa mivantana tamin'ny mpitolona tao amin'ny Magro ny tenany. Nambarany moa fa tokony ho tsapan'ireo mbola manao antsojay fa tsy azy ireo ny aina fa Andriamanitra no mandidy sy manapaka momba izany. Nitondra fankaherezana ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra ny tenany amin'izao fankalazana ny nahaterahan'ny mpamonjy izao na dia ao anaty fahoriana sy tsy fahampiana tanteraka aza ny Malagasy noho ny hetraketraky ny mpanongam-panjakana. "Asandrato ny hira Krismasy satria efa nanankina ny fiainantsika tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany isika" hoy ihany ny Filoha RAVALOMANANA. Nanteriny moa fa mitana ny toky nomeny amin'ny fiverenany tsy ho ela ny tenany ary nangataka ny hitondrana izany am-bavaka mba ahafahany mitory fifamelana sy firaisan-kina ary mampandroso indray ny Firenena iombonana.
17/12/2011: Filoha RAVALOMANANA : "raisiko ny risika rehetra, hody aho"
10/12/2011 : Filoha RAVALOMANANA : « ny andininy faha-20 no fanalahidin'ny fankatoavana »
Nitafa tamin’ny vahoakan’ny Kianjan’ny Finoana ny Filoha RAVALOMANANA androany taorian’ny herinandro maromaro tsy nitafany. Nikasika indrindra ny fanapahan-kevitra noraisin’ny CPS-UA no nitondrany fanazavana tamin’izany ka nanamafisany fa , ankoatran’ny famporisihina ny hamahana ny krizy sy ny fanatanterahana ny tondrozotra dia voamarika tsara ao anatin’ny fampitam-baovao avy amin’ny filan-kevitrin’ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa fanalahidin’ny fankatoavana iraisam-pirenena sy ny fiverenan’I Madagasikara eo amin’ny toerany ao amin’ny Vondrona Afrikana ny fanatanterahana ny andininy faha-20 ao amin’ny tondro zotra. Nomarihin’ny Filoham-pirenena RAVALOMANANA Marc fa “efa maro ny tetikady nataon’ny mpanongam-panjakana azahoana izany fankatoavana izany saingy tsy misy ankoatran’ny fiverenako an-tanindrazana no hiverenan’izany ho an’ny Madagasikara”. Farany dia nankahery ny vahoaka Malagasy ny tenany indrindra amin’izao ankatokin’ny fankalazana ny tsingerin-taonany izao.
Efa faniriana niombonana manko ny hankalaza izany miaraka saingy nanamarika ny Filoha RAVALOMANANA fa “fikasana ihany ny an’ny olombelona fa Andriamanitra no mandahatra”. Nanome toky anefa ny tenany fa tsy maintsy hifanatrika amin’ny mpiray tanindrazana eo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny tenany amin’ny andro mampety izany.
29/11/2011 : Governemanta Beriziky- "Rehefa tsy mitsinjo antsika dia miala tao" hoy ny filoha Ravalomanana
Nanameloka ny hetraketraka nokasaina hatao tamin'ny zanany ny Filoha RAVALOMANANA raha nitafa tamin'ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna teo amin'ny Kianjan'ny Finoana androany. "Ankehitriny" hoy izy "dia any amin'ny trano fonenan'ny masoivoho iray eto Antananarivo no mialokaloka ny zanako ary tsy azo ekena izany satria manana ny maha-izy azy ny Malagasy". Noho ireo tranga rehetra ireo dia nanome toromarika ireo Ministra misolotena ny Ankolafy tarihiny ao anaty governemanta Beriziky ny Filoham-pirenena.
Nambarany fa noho ny fifampiresahana dia nanaiky niditra tao anaty governemanta ny Ankolafy RAVALOMANANA na dia efa nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fitsipahany izany aza ny tenany "saingy ankehitriny kosa raha tsy mazava ny fitsipi-dalao" hoy ny Filoha RAVALOMANANA "tsy hitako izay ijanonana ao anatin'io governemanta io". Nanentana ny vahoaka ihany koa ny tenany mba ho mailo hatrany satria tsy kely lalana ny ratsy ary namafisiny fa tsy maintsy hiverina haingana ny tenany satria vao maika nanaitra azy ny zava-nitranga hatramin'ny nahatongavan'ny lahy haivony eto an-tanindrazana
22/11/2011 : Filoha RAVALOMANANA : « tsy ara-dalàna io governemanta io »
Manameloka ny fitiavan-tena be loatra sy ny fitiavan-tseza tafahoatra ataon’I TGV sy ny ekipany ny Filoha RAVALOMANANA Marc. Nambarany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana androany fa “tsy araka ny voarakitra ao anaty tondro zotra ny fanendrena ireo minisitra napetraka ao anaty governemanta Beriziky”. Nohamafisiny fa tena tsy nalalaka mihitsy ity praiministra ity tamin’ny fisafidianana ireo mpiara-miasa aminy indrindra fa ireo hitana “ministères de souveraineté”. Ny fizarana ny andraiktra ao anatin’ilay goverenamanta rahateo efa tsy mampiseho sahady ny fisian’ny fifandajam-pahefana eo amin’ny FATE sy ny mpanohitra azy. Folo amin’ny dimy amby telopolo mantsy no mba nomena ny Ankolafy RAVALOMANANA sy Zafy fa ny ankoatra izay dia mpanompon’i TGV avokoa raha tokony maty sasaka izany mba hampifandanja tanteraka ny fahefana.
Tsy vitan’izany fa ireo mpanongam-panjakana mahery fihetsika dia naverina avokoa ary nisy mihitsy ny nampiakarina grady toa an’I Hajo Andrianainarivelo izay lasa praiministra lefitra. Namafisin’ny Filoha RAVALOMANANA ary fa « matoky tanteraka ny SADC isika amin’ny famahana ny olana ary efa nandefa taratasy mazava mirakitra ny tatitra momba iny fanendrena governemanta iny» any amin’ny TROIKA ny tenany . Niaiky ny Filoham-pirenena fa tena efa tsy misy lalàna intsony eto Madagasikara hany ka hararaotin’ny vahiny sasany ny fahantran’ny Malagasy ary dia tonga amin’ny fanalana ny ain’ny mpiray tanindrazana izany. Toky no nomeny mpiara-mitolona rehetra fa tsy hangina ny tenany raha tsy tafaverina eto Madagasikara ny ara-dalàna efa nimatesany hatrin’ny ela.
12/11/2011 : Filoha RAVALOMANANA : "nisy fepetra napetraka mialohan'ny fidirana anaty goverenemanta"
Nitafa mivantana tamin'ireo vahoaka mpitolona teo amin'ny Kianjan'ny Finoana Magro Behoririka ny Filoha Marc RAVALOMANANA androany. Nanentana ny vahoaka Malagasy ny tenany mba tsy handairan'ny fampisaraham-bazana indrindra amin'izao vanim-potoana lalovan'ny Firenena izao. Nohamafisiny fa ny fepetra fototra napetrany tamin'ny fanendrena ny Praiministry ny tetezamita dia ny fanatanterahana ny andininy faha-20 ao amin'ny tondro zotra izay mikasika indrindra ny fiverenan'ny sesitany eto an-tanindrazana. "Mbola nisy ihany koa ny fepetra napetraka mialohan'ny hidirana ao anatin'ny fanatanterahana ny tondro zotra" hoy ny Filoha RAVALOMANANA raha nanazava tamin'ny mpiara-mitolona rehetra.
Isan'izany ny fametrahana ny Praiministra lefitra manana fahefana mitovy amin'ny Praiministra eo am-pelatanan'ny Ankolafy RAVALOMANANA sy ny fifandanjan-kery eo amin'ny fitsinjarana ny Ministera. Niantso ny tokony hanamafisana ny fifampitokisana ihany koa ny Filoha RAVALOMANANA ary nanome toky fa "tsy mitsahatra manao izay asa rehetra ahafahana mamoaka ny Firenena iombonana ao anaty krizy". "Tsy ny tenako no mitady toerana ao amin'io tetezamita io" hoy ny Filoham-pirenena "ary matoa afaka niditra dia azo atao tsara ny mivoaka rehefa tsy afaka mifanaraka". Nanamafy ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA fa matoky tanteraka ny SADC sy ny TROIKA ny tenany amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara.
04/11/2011 : Filoha RAVALOMANANA : « fitoniana no tokony alohan’ny zava-drehetra »
“Tsy handray anjara amin’io governemanta io ny Ankolafy RAVALOMANANA” hoy ny Filoham-pirenena raha nitafa tamin’ny mpanao gazety Malagasy tamin’ny alalan’ny antso an-tariby ny tenany. Tsy maintsy avoaka aloha ny gadra politika, miverina an-tanindrazana ny sesitany, misokatra ny hainoamanjery nakatona ary miverina malalaka ny fanehoan-kevitra izay vao azo antoka fa hampihatra ny tondro zotra ny praiministra vaovao ary afaka miara-misalahy aminy ny Malagasy tsy an-kanavaka. “Tsy hankato an’iny fanendrena iny velively ny tenako” hoy ny Filoha RAVALOMANANA “raha tsy maneho imason’izao tontolo izao fa hanatanteraka ny tondro zotra marina izy sy izay governemanta hajorony”.
Araky ny hevitry ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA dia sarotra aminy ny hanendry ireo mpanaraka azy izay handray anjara ao anatin’izao tetezamita izao raha tsy eto an-tanindrazana ny tenany. Hatreto anefa dia tsy mbola nisy ny antoka azo mikasika indrindra ny fanatanterahana ilay andininy faha-20 ao anatin’ny tondro zotra sy ny fametrahana fahatoniana politika ary tsy azo antoka ihany koa fa tsy hitanila any amin’ny vondrona politika nisy azy I Beriziky Omer. Nambaran’ny Filoham-pirenena moa fa “tsy miafina amin’izao tontolo izao intsony fa sekretera jeneralin’ny antoko leader fanilo ity praiministra ity”, io antoko io anefa dia mavitrika ao anatin’ny vondrona UDR-C manohana an’I TGV. Tsy mamela ny vahoaka Malagasy hanirery anefa ny Filoham-pirenena fa mbola nilaza mazava fa “hametraka fanontaniana amin’ny TROIKA sy ny SADC” ny tenany ahafahany mahita “ny lalana mazava harahin’ny Ankolafy RAVALOMANANA hivoahana amin’ny krizy”.
Taorian'ny famelabelarana nataon'ny Filoha RAVALOMANANA dia niroso tamin'ny famaliana ireo fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ny tenany :
01/10/2011 : Filoha RAVALOMANANA Marc : "Tsy tokony mandalo fitsarana intsony ireo gadra politika"
Miafina ao ambadiky ny famoahana ireo gadra politika sasantsasany ny FATE ankehitriny noho ny faneren'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena azy ireo hametraka fitoniana eto amin'ny Firenena. Tsy misy afaka madiodio anefa izy ireo fa dia mbola amoahana didim-pitsarana avokoa. Nanomboka tamin'ny raharaha Ambohijanaka izany ka nitohy tamin'ny resaka Radion'ny Gasy sy ny namany. Nambaran'ny Filoha RAVALOMANANA Marc teo amin'ny Kianjan'ny Finoana Magro Behoririka androany fa "tsy tokony mandalo fitsarana izany ny resaka gadra politika satria izany no tena fitoniana". Ankoatra izay dia nanterin'ny Filoham-pirenena fa ny SADC no hiantoka ny fiarovana manokana azy amin'ny fiverenana an-tanindrazana. Eo am-pandinihana ny momba izany ny TROIKA amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy apetraka aloha ny fifandraisana amin'ny mpanao politika Malagasy. Nanamafy hatrany ny tokony hiraisan'ny vahoaka hina ny Filoha RAVALOMANANA indrindra manoloana ny fihetsika mamoa fady ataon'ny FATE ankehitriny.
30/09/2011 : Filoha RAVALOMANANA :"Tohina amin'ny fihetsiky ny FATE ny SADC"
"Nihaona tamiko ny TROIKA an'ny SADC ary nanamafy fa mandrindra ny fiarovana ahy amin'ny fodiako izy ireo ankehitriny" hoy ny Filoha RAVALOMANANA nandritran'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Malagasy nataony androany. Araky ny fanazavana nentin'ny Filoham-pirenena dia isan'ny zava-dehibe nampanantenainy ny vahoaka Malagasy hambarany mialohan'ny sabotsy io mikasika ny fiarovana ny tenany io.
Fa nampitain'ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa fa tena tsy mankasitraka velively ny fihetsika nataon'ireo mozambikana nalefa hanelanelana momba ny raharaha Madagasikara ny SADC ary mahatsapa fa misy tombontsoa manokana tandroavana ny azy ireo ao anatin'izao famahana olana izao. Nambaran'ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA ihany koa moa fa "tena nahasorena ny SADC ny namoahana ny didy fampisamborana ahy ny andron'ny fanaovana ny sonia teny Ivato iny". Mbola nanampy trotraka izany ny filazana fa handefa hery famoretana hisambotra ny Filoha RAVALOMANANA any Afrika Atsimo ny FATE. Nanome toky ny Filoha RAVALOMANANA arak'izany ny TROIKA fa hanao izay hametrahana haingana ny rafitra maharitra hifandraisan'ny SADC sy ny Malagasy mandray anjara amin'ny fivoahana amin'ny krizy mba ahafahana mandrindra ny fomba hanatanterahana ny tondro zotra. Teo am-pamaranana moa dia namafisin'ny Filoha RAVALOMANANA fa ny fipetrahan'io "bureau de liaison" io no andrasana dia afaka miverina an-tanindrazana avy hatrany ny tenany ary hanamora ny fankatoavana iraisam-pirenena izany.